Global Voices teny Malagasy » Venezoela: Navotsotra i Ortega, ilay mpisera Twitter ‘manakorontana’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Avrily 2019 3:42 GMT 1	 · Mpanoratra Ellery Roberts Biddle Nandika Liva Andriamanantena
Hugo Chavez Frias. Sary tao amin'ny anticapitalistes.net. (CC BY-NC-SA 2.5 ES)
VAOVAO FARANY: Navotsotra tany amin'ny paositry ny polisy ny 16 Martsa 2013 i Lourdes Alicia Ortega Perez, ilay vehivavy Venezoeliana nosamborina  taorian'ny fanesoany an'i Hugo Chavez tao amin'ny Twitter. Nentina tany amin'ny fitsarana i Ortega noho ny fiampangana azy ho nanaparitaka vaovao diso sy ny fanaovana hosoka. Efa nomena fahafahana  izy nanomboka tamin'izay saingy tsy maintsy miseho eo anatrehan'ny fitsarana isaky ny 30 andro.
Azo inoana fa nandray fepetra hamaliana ireo mpanohitra ara-politika sy ny tsikera ny governemanta Venezoelana tamin'ny toe-draharaha saropady manokana taorian'ny andro nahafatesan'i Chavez tamin'ny 5 Martsa 2013. Nandefa ilay sioka nanohintohina ny 9 Martsa i Ortega, izay nisioka teo ambanin'ny anaran'ny mpisera @ulilou, ho valin'ny fanotanian'ilay mpisera @ douglirodil izay nanontany (angamba mananihany) raha toa ka maty ny filoha. Hoy ny sioka navaliny:
@douglirodil Tsy fantatro fa lasa saribakoly savoka izy
Nitatitra momba ny fitazonana an'i Ortega  ny Global Voices Advocacy ary nanamarika ny fisian'ny hetsika maro tao amin'ny Twitter, izay nahitana ireo mpisera maro nandà ny fiheverana fa azo lazaina ho “manakorontana” ny firenena ny sioka toy izany.
Tsy mbola mazava raha hifarana ity fepetra ity any aoriana na mbola tsy maintsy hiseho isam-bolana amin'ny fotoana tsy voafetra eo anoloan'ny fitsarana i Ortega. Nilaza tamin'ny Global Voices Advocacy ny manam-pahaizana momba ny lalàna fa namoaka fanapaha-kevitra nitovy tamin'ny tranga teo aloha nahitana ny “tsaho” niparitaka tao amin'ny tambajotra sosialy ny fitsarana.
Miaiky ireo mpiaro ny zon'olombelona  amin'ny ankapobeny fa azo ekena ny zon'olombelona tsy manam-petra ho an'ny fahalalaham-pitenenana  raha toa ka afaka mampihatra io zo io “tsy misy tahotra valifaty” ny olona iray. Na dia afaka manohy maneho hevitra malalaka amin'ny aterineto aza i Ortega dia manondro ny fitakian'ny fitsarana fa haraha-maso akaiky ny fitondrantenany amin'ny aterineto, fepetra izay inoana fa hahatonga azy farafahakeliny hatahotra ny sazy mety hiseho manaraka.
Mbola mavitrika hatrany ao amin'ny Twitter ny kaontin'i Ortega, saingy tsy nisioka izy hatramin'ny 12 Martsa, talohan'ny nisamborana azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/14/137085/
 nomena fahafahana: http://www.reportero24.com/2013/03/lara-dejan-libre-a-twitera-que-comento-sobre-cadaver-de-chavez/
 mpiaro ny zon'olombelona: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43399&Cr=China&Cr1#.UUoRLBm_TdA